eNasha.com - मर्ने बेलामा बिहा
मर्ने बेलामा बिहा
९३ वर्षीय एक बूढा व्यक्ति र ८५ वर्षीया महिलाबीच बिहे सम्पन्न भएपछि तिनको बिहेलाई बेलायतकै सबैभन्दा वृद्ध प्रेमीप्रेमिकाबीचको बिहेको कीर्तिमान बन्न पुगेको छ ।
जेम्स मेसनले आफ्नी प्रेमिका पेग्गी क्लार्कलाई मात्र एक महिनाअघि भेटेका थिए । दुवैबीच एक महिने रोमान्स चल्यो । यही रोमान्सले अहिले वैवाहिक जीवन बिताउने अवसर जुरेको स्काई न्यूजले जनाएको छ ।
धेरैलाई गफ या अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर जेम्सको कथनलाई तपाइँ हामीले विश्वास गर्नैपर्छ, उनले भने- "जब मैले उनलाई देखेँ, हामीलाई एकै नजरमा प्रेम बस्यो । हुन त एक नजरमा प्रेम हुने कुरालाई धेरैले अस्वीकार गर्छन्, तर हाम्रो जीवनमा त्यो साक्षात् बनेर आयो ।"
दुवैबीच भेटघाट डेभोनस्थित पेग्टोनमा रहेको एउटा डे केयर सेन्टरमा भएको थियो ।
"यो उमेरमा मेरो बिहे हुनु एउटा जादू नै हो । मलाई यो एउटा सुखद् सपना झैँ लागिरहेको छ", ८५ वर्षीया नवदुलही पेग्गीले भनिन्- "कतै म केही मिनेटमा ब्यूँझन्छु कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।"
"मैले उसँग हात मिलाएँ । मैले उसको आँखामा हेरेँ, शान्त उसको आँखामा के जादू थियो कुन्नी मैले बेहोसीमा भने- 'तिमी यता आइरहन्छौ कि कसो ? कहीँ देखेचिनेजस्तो लागिरहेको छ ।' अचम्म ! मैले पहिलो भेटमा नै यस्तो भनेकी थिएँ", पेग्गीले स्काई न्यूजलाई बताइन् ।
यता जेम्सको मनमा पनि त्यस्तै भावना थियो । एक महिना डे केयर सेन्टरमा सँगै दिनहरु बिताएपछि आफ्नो मनभित्रको कुरा नबताउनु 'पाप' गरे सरह हुने ठान्दै बिहेको प्रस्ताव राखेका थिए । बेलायतका यी सबैभन्दा बूढाहरुको बिहे हेर्न त्यसो त डे केयर सेन्टरका बूढाबूढी र कर्मचारीबाहेक अरु कोही उपस्थित थिएनन् ।